आयषुका संगीत शिक्षक भन्छन्, 'उनी साह्रै चकचके थिए' (भिडियोमा)
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:१७
भारतीय जिटिभी रियालिटी सो सारेगमप लिटल च्याम्समा सहभागि भएर फर्किएका आयुष केसीलाई भक्तपुरमा सम्मान गरिएको छ । आयुषलाई भक्तपुरस्थित मोर्डन बोर्डिङ स्कुलले एक लाख रुपैयाँ पुरस्कारसहित भ्व्य स्वागत गरेको हो । उनी मोर्डन बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन् ।
फ्रेब्रुअरी ९ बाट सुरु भएको सारेगमपमा नेपालबाट दुई जना फाइनलमा पुगेका थिए । यो वर्ष प्रितम आचार्य र आयुष केसी सहित नेपालबाट ८ जना सहभागी भएका थिए। १२ वर्षका आयुष र ११ वर्षका प्रितममात्र कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
कलिङ्ग राउण्डबाट मेगा अडिसनमा प्रस्तुति दिएपछि उनीहरु टप ३० मा पुगेका थिए। दुवैलाई उपाधीको दावेदार मानिएको थियो । तर अन्तिममा आएर भारतकी सुगन्धा दातेले जितेकी थिईन् ।
हामीले आयुष पढ्दै आएको मोर्डन स्कुलका प्राधानाध्यापक अनिल कस्पाल र संगीत शिक्षक क्षितिज खुलुङसँग उनको सांगीतक यात्राको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ यो बिशेष कुराकानी ।
aayuch, Aayush kc, kc aayush, morden boarding school, preetam aacharya, saregamapa
Prevडन्डिफोर किन आउँछ ? बच्नलाई गर्नुहोस् यी उपाय
आयुषका आमा बाबु मिडियासँग किन रिसाए ? (भिडियो कुराकानी)Next